प्रतिवेदनमा फेरबदल भएपछि अनशन : आज आठौ दिन-NepalKanoon.com
प्रतिवेदनमा फेरबदल भएपछि अनशन : आज आठौ दिन
भदौ १४, काठमाण्डौं । सरकारले बनाएको स्वास्थ्यसम्बन्धी माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले फेरबदल गरेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका बरिष्ठ हाड जोर्नी विशेषज्ञ प्रा.डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको आज आठौं दिन पुगेको छ ।
डा. केसीसँग सरकारले पाँच पटक सहमति गरिसकेको छ । तर सहमति भएका विषय कार्यान्वयन नभएपछि उनी छैठौं पटक अनशन बसेका हुन् ।
उनले नेपालको स्वास्थ्य नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियातन्त्र हटाउनुपर्ने, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने लगायतका ८ वटा माग राखेर अनशन थालेका हुन् ।